musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bahamas Kuputsa Nhau » Chii Chitsva muBahamas muna Gumiguru
Kufamba kwekushanya • Bahamas Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • Culinary • tsika nemagariro • Entertainment • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • mumhanzi • nhau • Resorts • Vanodanana Michato Honeymoons • Shopping • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Inguva yekuverenga izvo zvinowira kutiza! Kunyangwe iwe uchida kuzorora pamahombekombe ejecha jena kana kurongedza mafambiro nemaitiro ekutsvaga mafaro, vashanyi vanogamuchirwa kuti vazive nei "Zviri Nani muBahamas" nedzimba dzine mukurumbira pasi rese, kuwedzera kwendege kwakananga uye zvitsva zvinokwezva padhuze.
Zvitsuwa zveBahamas zvakaenda kumba zvakakunda zvakakura mumatanho akasiyana muTravel + Leisure inotarisirwa kwazvo gore rega "World's Best Awards."
Yakagamuchirawo makumi maviri mazita mu20 Caribbean Travelers 'Choice Awards. Pamhepo.
Kuvhota online pamhepo yeCaribbean Vafambi 'Sarudzo Mhedzisiro inovhara Gumiguru 31, 2021.
Bahamas Inopenya Yakajeka nePasirese-Inozivikanwa Kuzivikanwa - Zvitsuwa zvakatora kumba zvakakura zvakakunda muzvikamu zvakasiyana mu Kufamba + Kwekuzorora inotarisirwa kwazvo pagoreMibayiro Yepasi Pose”Uye akagamuchira mazita makumi maviri mu 2021 Caribbean Vafambi 'Sarudzo Mubairo. Kuvhota online pamhepo yeCaribbean Vafambi 'Sarudzo Mhedzisiro inovhara Gumiguru 31, 2021.
Taste yeSLS Baha Mar - Muimbi anokunda mubairo weGrammy John Legend acharidza pa Taste yeSLS Baha Mar musi waNovember 5, 2021. Matikiti anosanganisira chikafu chinonaka, makoketi ehotera negirazi reLVE Rosé. Vanopinda vanofanira kunge vaine makore gumi nemasere zvichikwira.
United Airlines Inozivisa Zvinyorwa Zvisingatauriki kuNassau - United Airlines yakaunza itsva isina kumira Mugovera sevhisi kuNassau kubva kuCleveland Hopkins International Airport kutanga Zvita 18, 2021. Ndege dzinowanikwa kuti ubhuke kutanga kwaGunyana.
Hurricane Hole Superyacht Marina kuParadhiso Landing Inovhurwazve muna 2021 - Nedenderedzwa rakawedzerwa uye yekutanga yakagadzika T-docks yakaiswa, Dutu Hururu Hole Superyacht Marina inogadzirira kugamuchira zvakare vashanyi veye 2022 mwaka wechando yachting mwaka. Vashanyi vachanakidzwa nedzimba dzekugara padoko padhorobha, yepasi-rese yekutengesa, yekudyira kwakanaka uye yakakura zvinhu.
Kufamba neChivimbo neSandals Vacation Assurance - Sandals Resorts International inotangisa Shangu Zororo Kuvimbiswa. Vashanyi paSandals Royal Bahamian neEmerald Bay vanogona kuwana mabhenefiti anosanganisira ekutsiva zororo uye airfare kiredhiti, pasina muripo wekuisa wega kugara uye kuregererwa kukanzurwa.
Kupisa Kwekudonha Madhiri, All-Anosanganisira maitiro - Tizira kuGreat Bahama Island uye chengetedza kusvika ku40% kana uchigara pa Lighthouse Pointe kuGreat Lucayan Resort. Yekufambisa hwindo ikozvino iri Gumiguru 31, 2021.
Batisisa Zhizha neTropic Mapakeji -Kuwa kuri pano, asi iwe uchiri kugona kuita kuti nguva yezhizha izununguke ichienda kana uchigadzirira maviri kana matatu-husiku kugara pa Hilton kuResorts World Bimini. Tropic Mapakeji anotangira pamadhora 508 pamunhu anosanganisira kutenderera kwekufamba paTropic Ocean Airways kubva kuFort Lauderdale. Kubhuka hwindo iko zvino kusvika Zvita 31, 2021.
Gara Kwenguva Refu kuBaha Mar - Resort vashanyi pa Baha Mar gamuchira husiku hwechina mahara paunenge uchibhuka pekugara munzvimbo yepahotera kusanganisira Grand Hyatt, SLS naRosewood, pamwe neUS $ 100 yekushandira kiredhiti, kuwana kusingagumi kuBhaha Bay uye nerumbidzo ye "Dzokera Kumba" Rapid Antigen Bvunzo.
Hideaway Rakawedzerwa Zuva - Iyo Ocean Club, Iyo ina Seasons Resort, Bahamas iri kupa vaenzi husiku hwekuremekedza hwechina nehusiku humwe hwese hwakateedzana hwakabhadharwa, pamwe nechaunga chekufambisa nendege. Rwendo rwekufamba ikozvino kusvika munaZvita 31, 2022.
Iine zvinopfuura mazana manomwe zvitsuwa uye cays uye 700 yakasarudzika chitsuwa nzvimbo, The Bahamas iri mamaira makumi mashanu chete kubva kumahombekombe eFlorida, ichipa nzira yekupukunyuka iri nyore iyo inotakura vafambi kuenda kure nezuva nezuva. Zvitsuwa zveBahamas zvine hunyanzvi hwepasi rose hwekuredza, kudhiraivha, kukwasva, kubhururuka, uye zviitiko zvakasikwa, zviuru zvemamaira emvura anoyevedza epasi uye mahombekombe akajeka akamirira mhuri, vakaroora uye vafambi. Ongorora zvese zviwi zvaunofanira kupa pa www.bahamas.com kana uri Facebook, YouTube or Instagram kuti uone nei Zviri Nani muBahamas.